ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးဦးဆောင် သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သောချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လာရောက်ပြုလုပ်ရန် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ ~ Myanmar Online News
ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေးဦးဆောင် သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယခုလ ၂၆ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစတင်သွား ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း၌ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်များ၊ အာဏာရပါတီ၊ အဓိကအတိုက်အခံပါတီအပါအဝင် ဦးဆောင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊အစိုးရ လက်အောက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင် စီများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန် ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ယုံကြည်မှု၊ ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုကို အခြေခံသော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေးဦးဆောင် သောကိုယ်စားလှယ်သည်ချစ်ကြည် ရေးခရီးစဉ်အတွင်း၌ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အထင်ရှားဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ဖြစ်သည့်ကမ္ဘာ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များထဲတွင်ပါဝင် သော ယူရှီကူဒါအီဘတ်ဆုရုပ်ပွား တော်နှင့် ကမာကူရရုပ်ပွားတော် များအားသွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့သည်။
ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေးဦးဆောင် သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ချစ် ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း၌ ဂျပန် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီးရာထူးကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်နေ သည့် H.E.Mr. Taro ASO နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံကြား တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ဆက်စပ် နေသောလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင် နိုင်ရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုပြုလုပ် နိုင်ရေးနှင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတွင်လက်ရှိ ဖြစ် ပေါ်လျက်ရှိသောကိစ္စရပ်များ နှင့် ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများ ကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ ၏လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်သော Liberal Democratic Party ၏ Policy Research Council ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူနေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဖြစ်သူ H.E.Mr. Fumio KISHIDA ၊ အဓိကအတိုက်အခံ ပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့် Komeito ပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်အထက် လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သော H.E. Mr. Natsuo YAMAGUCHI၊ ဂျပန်လွှတ် တော်များမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂျပန် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီနှင့်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များမှခေါင်းဆောင်များ၊ ဂျပန်-မြန် မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှခေါင်းဆောင် များနှင့်တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံကြားရှိ ဆက်ဆံရေး၊ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရေး၊နှစ်နိုင်ငံ ကြားရှိလက်ရှိကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရင်းနှီးပွင့် လင်းမှုအပြည့်ဖြင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေး ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြ သည့် Marubeni Corporation ၊ Sumitomo Corporation နှင့် Mitsubishi Corporation များ မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ပြုလုပ် ရန် နှင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လာရောက်ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
#EPN #Myanmar_Online_News #ဦးသန်းဌေး #ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ #ဥက္ကဋ္ဌ #ဂျပန်နိုင်ငံ
ပြညျထောင်စုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖွံ့ဖွိုးရေးပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးသနျးဌေးဦးဆောငျ သညျ့ ကိုယ်စားလှယျအဖွဲ့ ဂျပန်နိုငျငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သောချစျကွညျရေးခရီးစဉ်မှ ပြန်လညျရောကျရှိ အမိုးသားအကိုးစီးပွားအတွကျ ရညျရွယျသောရငျးနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လာရောကျပြုလုပျရနျ ဂျပန်ကုမ်ပဏီ များနှငျ့လုပျငနျးရှင်များ ဖိတျခေါျခဲ့
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရကျ ညနေပိုငျးတွင်ဂျပန်နိုငျငံသို့ ချစျကွညျရေး ခရီးသွားရောက်ခဲ့သညျ့ပြညျထောင်စုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖွံ့ဖွိုးရေးပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးသနျးဌေး ဦးဆောငျသောကိုယျ စားလှယျအဖွဲ့သညျ ရန်ကုနျမွို့သို့ပြန်လညျရောကျ ရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပါတီဥက်ကဋ်ဌဦးသနျးဌေးဦးဆောငျ သောကိုယ်စားလှယျအဖွဲ့သညျ ယခုလ ၂၆ ရက်တွငျ ဂျပန်နိုငျငံ သို့ ချစျကွညျရေးခရီးစတငျသွား ရောက်ခဲ့ခြငျးဖြစ်ကာ ချစျကွညျရေး ခရီးစဉျအတွငျး၌ ဂျပနျအစိုးရအဖွဲ့၊ လှှတျတ်မောျား၊ အာဏာရပါတီ၊ အဓိကအတိုကျအခံပါတီအပါအဝငျ ဦးဆောင်နိုငျငံရေးပါတီများ၊အစိုးရ လကျအောကျရှိ ဖွံ့ဖွိုးရေးအဂျေငျ စီများမှ ခေါငျးဆောင်များ၊ တာဝနျ ရှိသူများနှငျ့တွေ့ဆုံကာ ယုံကွည်မှု၊ ရငျးနှီးချစျကွည်မှုကို အြခေခံသော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သညျ။
ပါတီဥက်ကဋ်ဌဦးသနျးဌေးဦးဆောငျ သောကိုယ်စားလှယျသည်ချစျကွညျ ရေးခရီးစဉျအတွငျး၌ ဂျပန်နိုငျငံရှိ အထငျရှားဆုံးဗုဒ်ဓရုပ်ပွားတ်မောျား ဖြစျသညျ့ကမ်ဘာ့ဉာဏျတောျအမြငျ့ဆုံး ဗုဒ်ဓရုပ်ပွားတ်မောျားထဲတွင်ပါဝငျ သော ယူရှီကူဒါအီဘတ်ဆုရုပ်ပွား တ်နောှငျ့ ကမာကူရရုပ်ပွားတောျ များအားသွားရောက်ဖူးမြေ်ခာဲ့သညျ။
ပါတီဥက်ကဋ်ဌဦးသနျးဌေးဦးဆောငျ သောကိုယ်စားလှယျအဖွဲ့သည်ချစျ ကွညျရေးခရီးစဉျအတွငျး၌ ဂျပနျ ဒုတိယဝနျကွီးချုပ်နှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျ ကွီးရာထူးကို ပူးတွဲထမျးဆောငျနေ သညျ့ H.E.Mr. Taro ASO နှငျ့ တွေ့ဆုံပွီးနောကျ နှစ်နိုငျငံကွား တွငျ ရငျးနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ဆက်စပျ နေသောလုပျငနျးများတိုးချဲ့လုပ်ကိုငျ နိုငျရေး၊ စီးပွားရေးကဏ်ဍတွငျ ပူး ပေါငျးဆောငျရက်မွှုများပိုမိုပြုလုပျ နိုငျရေးနှငျ့နှစ်နိုငျငံကွားတွင်လကျရှိ ဖြစျ ပေါျလျကျရှိသောကိစ်စရပ်များ နှငျ့ ဆိုငျသောအကွောငျးအရာများ ကို ရငျးနှီးပွငျ့လငျးစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကွသညျ။ ထို့အပြငျ ဂျပန်နိုငျငံ ၏လကျရှိအာဏာရပါတြီဖစျသော Liberal Democratic Party ၏ Policy Research Council ဥက်ကဋ်ဌအဖြစျ တာဝနျယူနပွေီး ဂျပန်နိုငျငံခြားရေးဝနျကွီးဟောငျး ဖြစျသူ H.E.Mr. Fumio KISHIDA ၊ အဓိကအတိုကျအခံ ပါတီတစ်ခုဖြစျသညျ့ Komeito ပါတီ ခေါငျးဆောငျဖြစျပွီး ဂျပနျအထကျ လှှတျတောျအမတျ တစျဦးလညျး ဖြစျသော H.E. Mr. Natsuo YAMAGUCHI၊ ဂျပန်လှှတျ တ်မောျားမှတာဝနျရှိသူများ၊ ဂျပနျ နိုငျငံတကာပူးပေါငျးဆောငျရွကျရေး အဂျေင်စီနှငျ့နီပွနျဖောငျဒေးရှငျးတို့ ကဲ့သို့ဖွံ့ဖွိုးရေးဆိုငျရာအဖွဲ့အစညျး များမှခေါငျးဆောင်များ၊ ဂျပနျ-မြနျ မာချစျကွညျရေးအသငျးမှခေါငျးဆောငျ များနှငျ့တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုငျငံကွားရှိ ဆက်ဆံရေး၊ အပြနျအလှန်ပူးပေါငျး ဆောငျရက်မွှုများပြုလုပျရေး၊နှစ်နိုငျငံ ကွားရှိလကျရှိကိစ်စရပ်များဆိုငျရာ အကွောငျးအရာများကို ရငျးနှီးပွငျ့ လငျးမှုအပြညျ့ဖြငျ့ အပြနျအလှနျ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သညျ။
ထို့အပြင်ပါတီဥက်ကဋ်ဌဦးသနျးဌေး ဦးဆောငျသောကိုယ်စားလှယျအဖွဲ့ သည်ဂျပန်ကုမ်ပဏီများဖြစျကွ သညျ့ Marubeni Corporation ၊ Sumitomo Corporation နှငျ့ Mitsubishi Corporation များ မှ တာဝနျရှိသူများ၊ စီးပွားရေးလုပျ ငနျးရှင်များနှငျ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ မြန်မာနိုငျငံအတွငျး၌ ရငျးနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှငျ့ပြုလုပျ ရနျ နှငျ့အမိုးသားအကိုးစီးပွားကို အြခေခံသညျ့ရငျးနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လာရောကျပြုလုပျရနျ ဖိတျခေါျခဲ့ ကွောငျး သိရသညျ။
#EPN #Myanmar_Online_News #ဦးသန်းဌေး #ျပည်ထောင္စုကြံ့ခိုင်ရေးနွင့်ဖြံ့ဖြိုးရေးပါတီ #ဥက္ကဋ္ဌ #ဂ်ပန္နိုင်ငံ